ट्रम्पकी पत्‍नी किन समाउन चाहन्‍नन् श्रीमानको हात ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /International/ट्रम्पकी पत्‍नी किन समाउन चाहन्‍नन् श्रीमानको हात ?
वासिङटन : चुनावी अभियानमा व्यस्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको जोडी यतिबेला अर्को एक फरक घटनाका कारण चर्चामा छन् ।
घटना सानै हो । र निजी पनि । यही आइतबार ट्रम्प र उनकी पत्नी मेलानिया एक कार्यक्रममा जाने क्रममा विमानबाट ओर्लँदै थिए ।ओर्लँदै गर्दा मन्द हावाको सिरेटोले उनीहरुको कपाल र कपडा अव्यवस्थित बनाइदिएको थियो ।